Qanyare oo sheegay in aanay jirin federaalnimo, kuna tilmaamay wadahadalada u socda Puntland & Somaliya sharci darro. [Akhris …] – Radio Daljir
Muqdisho, Aug 20 – Iyadoo magaalada Galkacyo lagu soo gaba gabeeyey kulan balaaran oo dhexmaray madaxda dawlada Puntland iyo waftiga R/wasaaraha dawlada federaalka ah ee Somaliya kaasi oo diirada lagu sarayey sidii loo xalin lahaa khilaafaadka hoose ee u dhexeeya Puntland iyo dawlada Somaliya ayaa waxaa kulnakaasi iyo natiijadii kasoo baxday ku tilmaamay wax kama jiraan xildhibaan Maxamed Qanyare Afrax oo ay waraysatay idaacada Daljir.
Md. Qanyare ayaa sheegay in wafdiga dawlada ee uu hogaaminayo R/wasaare Sharmaake aysan qaab sharci ah ku socon, balse ay wax xalin kale ay u socdaan sida uu hadalka u dhigay.
Md. Qanyare waxa uu tusaale u soo qaatay in dawlada Somaliya ay ku dhisan tahay qaab 4.5 ah walina asyan gaarin qaab federaal ah taana ay wax kama jiraan ka dhigayso safarka uu Puntland ku joogo R/wasaare Sharmaarke
Xildhibaan Qanyare oo la waydiiyey in Puntland ay kaalin ka qaadan kadho arimaha nabadeenta dalka Soomaliya ayuu sheegay in taasi ay meesheeda tahay balse kulnakan uu yahay mid si gaar ah u dhexmaray beel, laakiin aysan Soomali u dhamayn, sida uu hadalka u dhigay.
Qanyare oo ka jawaabayey su’aal ahayd in Puntland ay lacago badan ku kharashgaraysay dawalada Soomaliya, kaalina ay ka qaadatay dhismaha dawlada federaalka ah ee Somaliya ayuu sheegay in taakuladaasi aysan soo gaarin dawlada, balse siyaabo kale loo adeegsaday arintaana ay ahayd sida uu sheegay xildhibaanku, Puntland ka qaad, Puntland u dhiib, oo uu ka gaabsaday xildhibaanku in hadalkaasi maldahan uu sii bayaamiyo.
Qanyare waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karin hadalada kasoo yeeray madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, ee ahaa in hadii mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Soomaliya ay safar dibada ah u baxayaan in Puntland ay wafdi ku darsato, kaasi oo uu sheegay in macnaheedu ay tahay in Puntland ay tahay dawalad madax banaan, taasi oo aan ahayn sida uus heegay wax la qaadan karo.
Qanyare ayaa ugu dambayn sharaxay waxa uu Puntland ka aaminsan yahay, wuxuuna daboolka ka qaaday in Puntland ay dhisteen qabiil ka mid ah qabaa’ilada daga dalka Soomaliya, nabadna ay ka jirto, hase ahaatee aysan wax wada tashi ah aysan la wadaagi karin dawlada, hab federaali ahna aysan ku dhisnayn dawladu.
Hadalkani ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey kulamo looga hadlayo xallinta khilaafaadka hoose ee u dhexeeya Puntland iyo dawlada federaalka ha ee Somaliya, Galkacyo-na ay ku yeesheen mas’uuliyiinta labada dhinac kulamo lagu gorfaynayo iskaashi dhex mara labada dhinac, iyo is-faham siyaasadeed oo dhex mara Puntland iyo dawlada federaalka ah ee Somaliya.
Ibrahim Muse Dahran (Wadani)